Indlu Yamatshe Yendabuko ene-sauna & jacuzzi - Pals village (CE 3H 702) - I-Airbnb
Indlu Yamatshe Yendabuko ene-sauna & jacuzzi - Pals village (CE 3H 702)
Pals, Gerona / Girona, i-Spain
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Impals, S.L.
I-CASA CAN COSTA ePals inamagumbi okulala angu-3 futhi ilala angu-6.
Indlu inendawo yonke engu-255m2 (2745ft2):
indawo yokuhlala 95, ibhilidi elixhumene 90, (45 SPA + 45 igumbi), igceke 70m².
Inikezwe ukunambitheka okuhle futhi isanda kwakhiwa.
• 4 km ukusuka "PLATJA GRAN",
• 5 km ukusuka "PLATJA RACÓ",
• 5 km ukusuka enkundleni yegalofu "GOLF PLATJA PALS",
* Amakhilomitha angama-45 ukusuka esikhumulweni sezindiza "GIRONA"
• 25 km ukusuka esiteshini sesitimela "FLAÇA" ,
• 6 km ukusuka e-"LES BASSES D 'EN COLL"
futhi isendaweni enezintelezi enkabeni yedolobha.
Inefenisha yasengadini, ithala, izoso, indawo yokucima umlilo, i-ayina, i-inthanethi yokufinyelela, i-sauna, i-jacuzzi, iphampu yokushisa, isiphephetha-moya, i-pool yangasese eshisayo kanye nomabonakude.
I-American, i-induction cooker, ifakwe isiqandisi, i-microwave, ihhavini, ifriji, umshini wokuwasha, umshini wokuwasha izitsha, izitsha, izinto zokusika, izitsha zasekhishini, umenzi wekhofi, i-toaster kanye ne-juicer.
Indawo engokwemvelo lapho iNdlu itholakala khona, kanye nokuba seduze kolwandle, kuvumela umkhuba wemidlalo eminingi yasemanzini efana nokuntweza komoya, ukugwedla emanzini, ukuhamba ngomkhumbi ngomkhumbi noma ukutshuza emanzini kanye nokwenza ibhayisikili nokugijima.
Kukhona ithuba lokuqasha noma yiluphi uhlobo lwempahla yemidlalo yasemanzini, kanye nokuqashwa kwamabhayisikili.
Sicela uqaphele ukuthi izilwane ezifuywayo kanye namaqembu abantu abasha abangaphansi kweminyaka engama-30 ubudala abavunyelwe.
4.70 · 66 okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-Impals, S.L.
Inombolo yepholisi: HUTG 028790
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$322.
Hlola ezinye izinketho ezise- Pals namaphethelo